धरानमा लक डाउन उल्लंघन गर्ने १२ जना नियन्त्रणमा, टाँडी लगिएका युवामा ज्वरो देखिएपछि वीपी प्रतिष्ठान ल्याइयो | Makalukhabar.com
भरतराज शर्मा (गाेपाल)
चैत्र १२, धरान । सुनसरीको धरानमा लक डाउनको उल्लंघन गर्ने १२ जना ब्यक्ति सहित सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । लक डाउनको दोस्रो दिन प्रहरीले १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कोरोना भाईरसको महामारीसँग लड्न नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले हिजोदेखि नै देशैभर लक डाउन घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार धरानमा पनि लक डाउन गरिएको भएपनि हिजो धेरैले लक डाउन उलंघन गरेपनि प्रहरी प्रशासन कडा भएको थियो ।
धरानमा लक डाउने भर्ने सम्बन्धमा धरान उपमहानगरपालिका, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, इलाका प्रहरी कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ लगायतको संयुक्त बैठकले निर्णय गरिएको थियो । धरानमा आज बुधबार औषधी पसल बाहेक अन्य पसलहरु बन्द छन् ।
पसलहरु बन्द भइपनि केही ब्यक्तिहरु खुलेआम असुरक्षित तवरले घुमफिर गरेको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ती व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरी प्रशासनले धरानबासीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह पनि गरिरहेको छ । लक डाउनको उल्लंघन गरी घरबाट बाहिर निस्किएका १२ जनासँगै १२ वटा मोटरसाईकल, ९ वटा स्कुटर, एउटा सिटी सफारी र एउटा टेम्पो पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख डिएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले जानकारी दिए । उनीहरुलाई थप कारवाहीका लागि अगाडी बढाईने बताइएको छ ।
कोरोना बिरुद्ध धरानमा जनचेतना जगाउन उपमहानगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासनले (कोरोना) अर्थात ‘को’ को अर्थ कोहीपनि ‘रो’ को अर्थ रोडमा र ‘ना’ को अर्थ ननिस्कौ भन्ने तय गरेको छ ।
यसैबीच भारतको बेङ्लोरबाट नेपाल आएका सिराहा लाहानका एक युवालाई हिजो (मंगलबार) साँझ मोरङको टाँडी क्वारेन्टाइनमा पठाइए पनि उनलाई मध्यराती नै धरान ल्याइएको छ ।
ज्वरो आएको पाइएपछि उनलाई मध्यराती डेढ बजे टाँडी क्वारेन्टाइनले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाएको थियो । उनलाई अहिले प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा राखिएको छ । ज्वरो आएपछि नेपाल आर्मीले फिर्ता पठाएको र उनलाई आइसोलेसनमा राखिएको प्रतिष्ठानका अस्पताल सहायक निर्देशक डा.विकास साहले जानकारी दिए । उनको थप परिक्षण भईरहेको छ ।
कोरोना अपडेटः १८ हजार ९०७ को मृत्यु, ४ लाख बढी संक्रमित, कुन देशमा कति ?
चैत १५, काठमाडौं। नेपालमा आज फेरि थप एकजनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। शनिबार भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा बाग्लुङकी एक २२ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको भेटिएको हो। आज टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट सो पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। को... जारी राख्नुहोस...